अमेरिकावाट नेचासल्यानका 'वडा अध्यक्ष'लाई चिठी
[September 25, 2020 12:16:21 PM]
यसैले मैले यसरी नै बोले है...।
“...आराम रही आरामको कामना...”
पहिले-पहिले खामबन्दी चिठ्ठीहरुको आरम्भ विन्दु यस्तै हुन्थ्यो । समय र प्रविधीले यस्ता अनेकौं औपचारिकताहरु डेड एक्सपायर्ड नै बनाई छोड्यो । र बनायो यो विशाल संसार नै एउटा सानो गाउँ । एक थान मोबाइल भित्रै हाम्रो गाउँ र सिङ्गै संसार अटेको छ । त्यसैले त अचेल सञ्चो-बिसञ्चो निमेषभरमै थाह हुन्छ ।
सयौं सम्भावनाहरुको शहर त्यागेर सबैले छोडेको गाउँ फर्केको तन्नेरी मान्छे हौं तिमी । शहरको झिलीमिली छोडेर गाउँमै उज्यालो बाल्नुछ भन्दै उल्टो बाटो हिडेको तिमीले गाउँमा कति अध्याँरो हटाउन सक्यौ ? फराकिला, चिल्ला अनि कालोपत्रे चत्रपथ र राजमार्ग भूलेर बस्तीमै साँगुरो बाटो खन्नुछ भन्दै गाउँ पसेको तिमीले कति बाटो खन्यौ ? यी सबैको लेखाजोखा र प्रश्न गर्ने हिम्मत मसँग एक रति पनि छैन । म आफु त यसै गाउँदेखि शहर हुँदै देशै छोडेर परदेशीएको आम मान्छे... ।
...तर फर्कनु चाहि छ नै छ आफ्नै गाउँ र बस्ती... ।
सिङ्गै देश छातीमै अटाएर बाँचेका म जस्ता हजारौं “म”हरु यो कहरमा आफ्नो गाउँबस्ती सम्झदै एकान्तबाँसमा बस्न बाध्य छौं । खै रहर हो कि बाध्यता ? परदेश भनेको पर-देश नै हुँदो रहेछ । यो पर-देशबाट घरदेशका सम्झनाहरु सम्झी सक्नु छैन । र बिर्सी सक्नु कहाँ छन् र हाम्रो पनि दैनिकीहरु...। तिमीलाई थाह छ, म यत्तिबेला यो कहरको केन्द्रबाट यी अक्षरहरु लेख्दैछु ।
"हाम्रो गाउँ सुरक्षित राख्नु पर्छ है..." भन्दै अस्ति तिमीले रखबारी गरेको खबर र तस्बिरहरु हेरे । अप्ठयारा र अभावहरुमा हामी छौं है... भन्दै सान्त्वना र सहयोग बोक्दै हिडेको पनि देखें । जोखिम त तिमी माथि पनि त्यत्तिकै छ । तिम्रो पनि आमा–बाबा, श्रीमती र बालबच्चाहरु छन् । जसको सम्पूर्ण भरथेग तिमी नै हौं । यो विषम समयमा तिम्रो नेतृत्व, जिम्मेवारी, कर्तव्य र कर्मलाई मेरो उच्च सम्मान छ साथी ।
सायद यी प्रश्नहरुको जवाफ तिमीले दिईरहेका छौं । जसै तिमी सुगम शहरबाट गाउँ फर्क्यो...। त्यसो नहुँदो हो त तिमीले पनि यो पल म जस्तै आफैले आफुलाई अनुत्तरित प्रश्न सोधीरहेका हुन्थ्यौं सायद । यसैले तिमी भोलीको दिन सम्झदै गाउँ फर्केको उर्जाशील मान्छे थियौ/हौं । अध्याराँ, अभाव र अप्ठयाराहरुमा बस्तीको उज्यालो बोकेर वास्तवमै सुल्टो बाटो हिडेको मान्छे हौं तिमी । उल्टो त हामी पो हिडेछौं...। मैले माथि पनि लेखेथें नि-
“फर्कनु चाहि छ नै छ आफ्नै गाउँ र बस्ती... ।”